Wararka Maanta: Arbaco, Oct 3 , 2012-Madaxweynaha Somalia oo weli ku Mashquulsan wadatashiyo ku aaddan Magacaabida Ra'iisul Wasaaraha iyo Waqtiga oo gabaabsi ah
Wadatashiyada uu wado madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay imaanayaa xilli uu gabaabsi yahay waqtiga looga baahnaa inuu kusoo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, kaasoo laga doonayo inuu soo dhiso xukuumad dalka hoggaamisa.
"Sababaha aan idin kugu imid waa inaan idin kala tashado ra'iisul wasaaraha aan soo magacaabayo. Su'aashuna waa; Ra'iisul wasaarha aan soo magacaabayo sidee doonaysaan inuu noqdo... maxaad doonaysaa inuu qabto... maxaase doonaysaan inuusan taaban ama ka leexdo," ayuu yiri Xasan Sheekh oo la hadlyay waxgarad uu labadii maalmood ee lasoo dhaafay kula kulmay degmooyinka Baydhabo iyo Baladweyne oo uu booqasho ku tagay.
Maalin walba waxaa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya ruuxa la doonayo in loo magacaabo xilkan, iyadoo mararka qaarkood ay dadku sheegayaan in xilkan laga yaabo in loo magacaabo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Maxamed C/llaahi Farmaajo, halka kuwo kalena ay sheegayaan in loo magacaabayo xubno kale oo ku cusub siyaasadda.
Ra'iisul wasaaraha xilligiisu dhammaadka yahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka mid ah siyaasiyiinta dadaalka xooggan ugu jira in xilkan loo magacaabo, iyadoo la sheegay inuu taageero buuxda ka hayso Puntland oo ka mid ah maamullada ka jira Soomaaliya iyo dowladda Kenya oo ciidammo ay kaga sugan yihiin gudaha dalka.
Madaxweynaha ayaa tan iyo markii uu xilka la wareegay wuxuu wadatashiyo ku aaddan magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub kula yeelanayay Muqdisho waxgarad, siyaasiyiin, ururrada bulshada rayidka ah iyo weliba qaybaha kala duwan ee shacabka oo ay ku jiraan dhallinyarada iyo haweenka, si uu uga helo fikir ku aaddan magacaabista ra'iisul wasaaraha.
"Haddii madaxweynuhu uu magacaabo nin horay siyaasadda ugu jiray waxay taasi sababi kartaa in sumcaddiisa ay la dagto. Waajibka madaxweynaha saaran waa inuu si wanaagsan uga fikiro cidda uu xilkan u dhiibayo, waayo xilku waa mid aad u culus," ayaa ka mid ah erayada ay dadku ku sheekeysanayaan.
Xilliyada soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha uu u xusay inuu soo dhiso dowlad dalka hoggaamisa afarta sano ee soo socota, iyadoo xilligii madaxweynaha looga baahnaa inuu ra'iisul wasaaraha kusoo magacaabo uu ku eg-yahay 10-ka bishan Oktoobar.